Fianakaviana 10 manankarena indrindra any Kenya 2022 - Victor Mochere
Vitsy amintsika no ho lasa miliaridera, fa samy manana fianakaviana avokoa. Ny haren'ny fianakaviana dia fanehoana ny soatoavin'ny fomban-drazana, ny lova, ny firazanana, ny maha-azo itokiana ary ny kalitao. Matetika izy ireo dia manolotra antso manerantany tsy mitovy amin'ny olona manankarena. Ny fomba lehibe hanamarihana ny harena ao amin'ny fianakaviana iray dia ny fahatsapana fa raha mijanona amin'ny asany izy ireo androany, dia manana ampy izy ireo mba hitazonana taranaka dimy ka hatramin'ny enina eo amin'ny tsipika amin'ny endrika tsara. Ny harena azo avy amin'ny taranaka iray mankany amin'ny iray hafa, dia manoro hevitra momba ny mpanjaka amin'ny fomba sasany.
Ireto ny fianakaviana 10 manankarena indrindra any Kenya.
$ 3.5 lavitrisa
$ 3.3 lavitrisa
$ 3 lavitrisa
$ 2.8 lavitrisa
$ 2.3 tapitrisa
$ 2.2 tapitrisa
$ 1.8 lavitrisa
$ 1.5 lavitrisa
Ny fianakaviana Nychae
$ 1.3 lavitrisa
$ 1.2 lavitrisa
สุด ยอด นัก เตะ ที่ มี ค่า ตัว แพง ที่ สุด ตลอด กาล เรา ได้ รวบรวม นัก เตะ ราย ได้ สูง ที่ สุด ไว้ ที่ นี้
Ahoana ny fomba hanampiana ny zanakao hiatrika ny fifosana sy ny tsaho
Kennedy Sitati hoy:
Janoary 7, 2022 amin'ny 11: 52 pm
Izany no antony manosika ny iray amin'izy ireo hiaro ny hareny
Emeka Ezeokoli hoy:
Janoary 9, 2022 amin'ny 10: 28 pm
Ka ny orinasa lehibe indrindra any Kenya dia mazava ho azy fa politika! Ireo eo amin'ny fitondrana sy ny lalan'ny fitondrana dia mampiasa fotsiny ny fahefam-panjakana sy ny heriny mba hampanan-kery izay tany an'arivony hekitara izay heveriny fa mety ho an'ny tenany, ny fianakaviany, ny namany, ny mpiara-miasa ary ny mpiara-belona.
Kisendrasendra ve ny nahatongavan'ny fianakaviana Moi sy Kenyatta tamin'ny isa 1-2, inona no "raharaha" nahafantarana azy ireo ankoatra ny politika? Any amin'ny kaontinanta afrikanina, indrindra ny ampahany mainty, ny elanelana misy eo amin'ny manankarena sy ny mahantra dia hantsana! ' hoy i Nuff.